South Asia and Beyond: सम्झनामा गाउँको एसएलसी (पूर्ण पाठ)
सम्झनामा गाउँको एसएलसी (पूर्ण पाठ)
सम्झनामा गाउँको एसएलसी
२०५७ साल असार । एसएलसीको रिजल्ट भएको तेस्रो वा चौथो दिनमा गाउँमा गोरखापत्र पुगेको थियो । रेडियोबाट यति र उति अंक लिएर विद्यार्थीहरु बोर्डमा परे वा टप गरे भन्ने सुन्दा सुन्दा मनमा हुटहुटी चलिरहेको थियो तर आफ्नो नतिजा थाहा पाउने उपाय थिएन ।
गोरखापत्र आएसंगै घरबाट बुवाले बोलाउँदा म बारीमा थिएँ, घाँस काट्दै हो या मकैका पात लुछ्दै, अहिले याद छैन । दौडँदै आएर हेर्दा हजारौं सिम्बोल नम्बरले भरिएको गोरखापत्र पिंढीमा थियो । कथं कदाचित् आफ्नो सिम्बोल नं भएन भने? वा पहिलो डिभिजनमा भएन भने?
भाग्यवश पहिलो डिभिजनकै सुचीमा कक्षा प्रथम म र दोस्रो साथी इन्द्र ढुंगानाको सिम्बोल नंबर थियो । कक्षाका २६ मध्ये १३ वा १४ जना पास भएका थियौं । हामीले कथित फलामे ढोका पार गरेका थियौं । अब जित्नका लागि हाम्रा अगाडि सिंगो संसार थियोः शहर जाऊ, क्याम्पस पढ, जागिर खाऊ, पैसा कमाऊ, बाआमालाई सुख देऊ, हाम्रो असीमित कार्यसुचीका प्रारम्भिक चरण तिनै थिए ।
Rangkhani Ma. Vi. Rangkhani, from where I passed my SLC
टाकुरामा स्कुल, खोंचमा घर । खाना खाएपछि सवा घण्टा हस्याङफस्याङ गर्दै उकालो नचढे समयमा स्कुल नपुगिने ।
स्कुल पुग्नासाथ फेरि कसैले खाना टक्र्याइदियो भने हामीले सजिलै अर्को एक भाग खान सक्थ्यौं तर दिनभरको पढाइपछि चार बजेसमेत नियमित खाजा खाने पैसा हुँदैनथ्यो । आँट भएका साथीहरुले वर्षौं बाँकी रहने गरी उधारोमा बिस्कुट, चिउरा र चाउचाउ खाइदिन्थे तर आफू त परियो पूरा मितव्ययिताको प्रतिमुर्ति । अरुले खाएको मंग बसाउने चनाको तरकारीको वास्ना सुँघेर घुटुक्क थुक त कति निलियो कति । साथीहरुले दिएका केही पापा बिस्कुट र एक फाँक चिउराले पेटलाई जिस्काइयो पनि कतिचोटि हो कतिचोटि ।
अनि त्यही भोको पेटमा जमेर भलिबल पनि कति खेलियो कति । फर्कंदा भोक र धपडीले खुट्टा लगलग काँप्थे तर खेल्न छोडिएन ।
Posing with 'Tikhe', our buffalo which fed us for 15 years
बिहान उठेर सिजनअनुसारको काम नगरी खाना खाने सोच्न पनि सकिंदैनथ्यो । वर्षायाममा भुईंघाँस काट्ने, बारी खन्ने वा कोदो रोप्ने, कार्तिकतिर धान र कोदो वा नल काट्ने, हिउँदका अरु महिना खन्ने, डल्ला फोर्ने, डाले घाँस काट्ने, यी थिए बिहान बेलुका हामीले गर्ने काम । त्यसबाहेक बर्खामा कोदो वा धान गोड्ने, सोत्तर काट्ने, अनि हिउँदमा स्याउला सोहोर्ने काम पनि हाम्रै थिए । असार र साउनको बिदाको बेला भने दिनभर लगाएर रोपाइँ गर्नुपथ्र्यो । आफ्नै घर धेरै दिन रोपाइँ चल्दैनथ्यो तर अर्मपर्म गरेर रोपाइँ गर्दा बोलाएका खेतालाको पर्म तिर्न जाँदा जाँदा महिना जान्थ्यो । मंसीरमा धान थन्काउँदा खेतबाट बिटा बोक्नुपथ्र्यो दिनभर अनि राती दश एघार बजेसम्म धान छाँट्दा ज्यान थकान र निद्राले काम नलाग्ने हुन्थ्यो । तर अलि पहिले थन्क्याइएका नयाँ जर्नेली चामलको घ्यूमा लतक्क भिजेको भात खाएपछि दिनको सारा दुख बिर्सिन्थ्यो ।
बिहान उठेर भकारा सोहोर्नु, गाइभैंसीलाई घाँस र कुँडो ख्वाउनु, साँझ–बिहान दुध दुहुनु अनि केही दिन बिराएर मोही पार्नु, यी काम त काममै गनिंदैनथे जसरी बिहानको नित्य कर्मलाई काम गनिंदैन । वास्तवमा ती सबै काम हाम्रा नित्यकर्म नै बनिसकेका थिए ।
The house where we were born and raised
गाउँको जीवन र गाउँको पढाइबारे धेरै जानकारी नराख्नेहरुका लागि यो पृष्ठभुमि दिनुपरेको हो एसएलसीको याद गर्दा ।
एसएलसीलाई फलामे गेट भनिए पनि हामीलाई त्यो सुनको गेटजस्तो थियोः दैनिक पन्ध्र घण्टा श्रम गर्नुपर्ने गाउँको जीवनबाट सदाका लागि बिदा दिने सुनको गेट । गेटको यतापट्टि विरक्त लाग्दो दुखी जिन्दगी थियो जहाँ कुर्कुच्चा पट्पटी फाटेका हुन्थे भने औंलाका काप हिलोले खाएर रक्ताम्य हुन्थे, उतापट्टि शहरको हेर्दै लोभ लाग्दो जिन्दगी हुन्थ्यो जसमा हिलो र झरीबाट टाढै रहन सकिन्थ्यो, तिघ्रा बाउँडिने गरी उकालोमा हिंड्नुको सट्टा बसमा सरर हावा खाँदै यात्रा गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक कहिलेकाहीं घर टप्किने सुनको गेट कटेर गइसकेका दाइदिदीहरुको भावभंगिमा, लवाइखवाइ, बोलीको लवज र तिनले घरमा पाउने पाहुनाको मनितो देख्दा अनि तिनले हेरेका फिल्मको नाम सुन्दा त......... । इष्र्याले जलेर अधीरतापूर्वक सुनको गेट पार गर्ने मुहुर्त पर्खनुको कुनै विकल्प थिएन ।
दश कक्षा पढ्दाखेरिको एउटा दिन मलाई याद छ । असार महिनामा स्कुल छुट्टि थियो तर नौ र दश कक्षाको ट्युसन चलिरहेको थियो । नौमा पढ्ने भाइ, म र अरु केही साथीहरु बिहानको कामले थाकेर लस्त भइसकेपछि ट्युशनका लागि खाना खाएर उकालो चढ्दै थियौं । चर्को घाम र रातीको वर्षाले सिर्जना गरेको आद्र्रताले उकालो चढ्दा उकुसमुकुस भइरहेको थियो । एउटा सिंढी चढेपछि खुट्टा लत्रिएर फेरि तल्लै सिंढीमा झर्न खोज्थ्यो । त्यस दिन एउटा विरलै हुने कुरा भयोः अल्पभाषी भाइले अघिल्लो साँझ बुवाले भन्नुभएको एउटा कुराको कटू आलोचना गर्यो ।
The field where we toiled
बुवाले भन्नुभएको थियोः हामीले तिमीहरुलाई पढ्नका लागि आदर्श खालको वातावरण मिलाइदिएका छौं । समयमा खाना छ, नास्ता छ, कापीकिताब पुगेनन् भन्नुपरेको छैन, आदि आदि । संयोग कस्तो भने, बुवाले त्यसो भनिरहँदा साँझ नौ बजिसकेको थियो र बिहानको काम, दिउँसो स्कुल गएर फर्कंदाको धपडी र साँझको कामले लखतरान भएका हामीले फेरि सिमीको झालको अजंगको झ्यांग पिंढीमा राखेर सिमी टिप्दै थियौं । त्यति बेलासम्म गृहकार्य गर्न जाने समय मिलेको थिएन । खाना खाएपछि निद्रा रोक्न सकिंदैन भन्ने सबैले जानेकै कुरा थियो ।
त्यसमा बुवाआमाको दोष थियो भन्ने पटक्कै हैन, हामी बरु कमसेकम स्कुल भएको बेला कठोर श्रबाट बच्थ्यौं, उहाँहरु दिनभर त्यसैमा हुनुहुन्थ्यो । साथै गाउँमा त्यति श्रम गर्ने केटाकेटी हामी मात्र थिएनौं । खाली अरु दिन गृहकार्य गर्ने बेलामा समेत त्यसदिन हामी सिमी टिप्दै थियौं र बुवाले सधैं जसो साँझपख दिने ज्ञानगुन लेक्चरको नियमित हिस्साले त्यो दिन यथार्थलाई व्यंग्य गरेजस्तो पर्न गएको थियो ।
हो, त्यस दिन उकालो चढ्दै गर्दा दिक्दारी पोख्दै भाइले बुवाले भनेका वाक्यहरु दोहोर्याइरह्योः हामीले तिमीहरुलाई पढ्ने आदर्श वातावरण................... । अरु के गर्नु थियो, हामीले उसलाई हाँसेर उडायौं । ऊ झन् उक्सियो र बुवाको नक्कल गर्दै दोहोर्याउन थाल्योः हामीले................ । हामी झन् हाँस्यौं, बाटो कटेको पत्तै भएन ।
This is 'work', not 'child labor' in villages
फर्केर हेर्दा गाउँको बाल्यकालले नोस्टाल्जिक बनाउँछ तर उतिखेर ती दिन र क्षणहरु त्यति प्रीतिकर थिएनन् । उसो त यो कुरा बाल्यकालका लागि मात्र लागू हुने हैनः अहिले अरुचिकर लागेका कति कुराहरु पनि भविष्यमा फर्केर हेर्दा प्रियकर लाग्नेछन् ।
शहर मात्र नभएर अहिलेका गाउँकै स्कुले विद्यार्थीहरुलाई हेर्दा पनि उतिखेर हामीले त्यति अभाव झेलेर र त्यति श्रम गर्दै स्कुल पढेका थियौं भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । खास गरी गाउँको अर्थतन्त्रलाई खाडी र मलेसियाको रेमिट्यान्सले धान्दै जान थालेपछि अहिले सबै उमेरका मानिसहरुले गाउँमा गर्ने शारीरिक श्रम कम भएको छ ।
जुन जमिनमा हामी आफैंले पसिना बगायौं, त्यसको ठूलो हिस्सा अब बाँझिइसकेको छ र त्यहाँ बस्ने बालबालिकाहरु अहिले पुस्तक पढ्नभन्दा टीभीमा झुमेर सिरियलका पात्रहरुका उट्पट्यांग वाक्य कण्ठ पार्नमा पोख्त छन् भन्ने सुनिन्छ । कोदो र मकै उब्जाएर हैन जीपहरुले घरघर पुर्याउने चामल र मैदा खान थालेका छन् मानिसहरु ।
ऊबेला एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्न थालेपछि घर पुगेर फर्कंदा हिंड्ने बेला बुवाको अनिवार्य प्रेम र चिन्तामिश्रित उर्दी हुन्थ्योः पुग्दाबित्तिकै चिठी लेख्नु । अहिले स्मार्टफोनमा गीत सुन्दै स्कुल जाने र कक्षा छोडेर भिडियो हेरिबस्ने केटाकेटीहरुको बिगबिगी छ भन्छन् ।
The tap where we quenched our thirst
यो न मेरो गाउँको मात्र कथा हो, न मेरो देशको मात्र । पुँजीवाद र विश्वव्यापीकरणसँगै बाँकी विश्वसित असमान किसिमको सम्बन्ध हुने सबैजसो अविकसित देशहरुमा अवस्था यस्तै छः भौतिक सुखसुविधाको उपभोग बढ्दै जाने तर त्यसअनुसारको आर्थिक तरक्की र आत्मनिर्भरता नहुने । अर्थात् खर्च र खपत बढ्ने तर उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने ।
त्यो समस्याका लागि हामी फेरि हाम्रो नोस्टाल्जिक बाल्यकालमा झैं दिनभर भोक सहेर स्कुल पढ्ने युगमा फर्कनुपर्छ भनेको हैन । तर आम्दानी र खर्च, उत्पादकत्व र उपभोगको तालमेल नमिलाए सम्म हामीले दीर्घकालमा प्रगति गर्न सक्ने छैनौं ।
गाउँको स्कुले शिक्षाका सम्झन योग्य कुराहरु धेरै छन् । बितिसकेको त्यो समयका पीडाहरु त माथि नै बताइयो तर त्यसका सबल पक्षहरु पनि धेरै थिए ।
त्यो पढाइ निशुल्क थियो । नौ र दश कक्षामा बर्खे ट्युशनलाई बाहेक पढाइका लागि खर्च लाग्दैनथ्यो । घरको काम र कक्षाको पढाइ दुवैले हामीलाई श्रमको महत्व बुझाएका थिए र हामीले श्रमको सम्मान गथ्र्यौं । दिन भरको भौतिक श्रमबाट बच्ने हो भने पढाइमा राम्रो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने हामीले सानैदेखि बुझेका थियौं ।
अहिले दुध चाहियो भने पसलमा गएर पोका किन्नुपर्छ भन्ने केटाकेटीहरुको बुझाइ छ भने हामीले दुधका लागि भैंसी पाल्न कति कठिन छ भन्ने आफैं काम गरेर बुझेका थियौं । त्यस्तै भातका लागि पसल गएर बोरा किन्नु सबै थोक हैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो ।
चार कक्षाबाट विधिवत् अंग्रेजी विषय पढ्न थालेका हामीले एसएलसीसम्म आउँदा कम्तीमा लेखाइको अंग्रेजी राम्रै बनाइसकेका थियौं । पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासले नपुगेर एसएलसीमा गणितमा न्हँछ बहादुर खाताखो र अंग्रजीमा सागर मान तुलाधरका प्राक्टिस बुकबाट अभ्यास गरेको मलाई अझै पनि याद छ तर अहिले एसएलसी र प्लस टू हुँदै एमबीबीएससम्म आउँदा समेत विद्यार्थीहरु पाठ्यपुस्तक समेत नपढेर गेस पेपर र गाइडमा झुम्मिएको देख्दा हाम्रो पढाइको संस्कृति नै स्खलित हुँदै गएको त हैन भन्ने लाग्छ ।
हाम्रा लागि एसएलसी पढाइको एउटा सामान्य खुड्किलो मात्र नभएर हिलोमा टेक्न नपर्ने, घाँस काट्न नपर्ने र बस चढ्न पाइने फरक संसारमा पुगेर आफ्नो भाग्य अजमाउने अवसर थियो । स्कुल सकेपछि भोग्नुपरेका कष्टकर र चुनौतीपूर्ण क्षणहरु आउन बाँकी नै थियो र भविष्यका सम्भावित अप्ठेराहरुबारे अनुमान लगाउने हाम्रो क्षमता पनि त्यतिबेला थिएन । तर मेहनत गरेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने दृढ विश्वासले नै हाम्रो पुस्ताका साथीहरुलाई अहिले हामीहरु जहाँ छौं त्यहाँ पुर्याएको हो ।
एसएलसीको गेटलाई भत्काएर अर्को सालदेखि सबै छिर्न मिल्ने बरण्डा बनाउने भन्ने सुनिंदैछ । गेटबाट अन्तिमपटक छिर्ने र यस पालि पर्खेर अब एकैचोटि बरण्डामै यात्रा गर्ने सबै भाइबहिनीहरुले क्षणिक सफलता वा असफलताका बीच पनि श्रमको मूल्य जान्न र त्यसलाई सम्मान गर्न सिकुन्, समाज र राष्ट्रका रुपमा हाम्रा लागि त्यो ठूलो कुरा हुनेछ ।
Labels: Memoir, Reflection, SLC